Gareeleen Wal Fincilan Sudaan Kibbaa Walii Galtee Araaraa Mallatteessan
Walii galteen kun wal waraansa biyyattii kan waggoota shanii xumuraan ga’a jedhamee abdatama. Walitti bu’iinsa kanaan uummata kurna kumaan laka’aman yoo dhuman miliyoonatti ka laka’aman qe’ee ofii irraa godaananiiru.
Prezidaant Saalvaa Kiir fi itti aanaan isaanii duraanii hoogganaan garee mormituu riek Machar walii galtee kana mallatteessuu dhaabbati oduu sudaan SUNAn gabaasee jira.
Akka walii galtee sanaatti Kiir prezidaantii ta’anii kan turan yoo ta’u Machaar immoo itti aanaa prezidaantii jalqabaa jechuun itti aantota prezidaantota shan keessaa tokko ta’uun biyyatti deebi’u.
Prezidaant Kiiriin kan hoogganamu yeroo ce’umsaa dura ka jiru baatilee saddeet-tti aansuu dhaan yeroo ce’umsaa waggoota sadiitu jiraata.
Paartii Kiir irraa ministeeronni 20 kan keessa jiran yoo ta’u garee Machaar irraa sagal, gareelee biroo irraa immoo ja’atu keessatti haammatama.
Kun yaaliiwwan kun yaalii hedduu walii galtee araaraa fi lola dhaabinsa erga bara 2013 ka’ee as keessaa isa boodanaa ti.
Walii galteen nageenyaa inni jalqabaa Adoolessa bara 2016 ennaa Juubaa keessatti lolli ka;ee Machaar miillaan biyyattii dhaa baqatan ka’e. erga yeroo Sanaa qabee afriikaa kibbaa keessa turan.
Gareeleen mirga namaa hangi tokko walii galtee sana simachuu dhaan kun sdarkaa jalqabaa qofa jechuun of eeggannoon dubbataniiru.
Waraanatti deebi’amee akka hin seenne, walii galteen sun aangoon harka namoota yartuu qofaa harka jiraachuu hin qabu jechuu dhaan itti aanaa direkteri garee Washington keessa maadheffatee kan “Policy at the Enough Project jedhu Brian Adeba beeksisaniiru.
Fedhiin hoogganoota siyaasaa murteessaa ta’uu isaaf nagaan Sudaan Kibbaaf akka bu’u gochuun itti gaafatama duraa kan hoogganoota kanaa ta’uu gareeleen kun beeksisaniiru.
Hoogganoonni sudaan Kibbaa nageenya buusuuf jecha walii galtee kana ennaa mallatteessan hoogganoonni biyoota gaanfa Afriikaa Dilbata Kaartuum keessatti wal ga’uu dhaan ragaa ta’anii jiran.